USimona-Umbono weSt.Peter's- ukubala usiya eBukumkanini
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona on NgoNovemba 8th, 2020:
Ndabona uMama; wayenengubo epinki elula, ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka entloko, isigqubuthelo esimhlophe esimhlophe nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Umama wayevule iingalo zakhe njengomqondiso wokwamkela, kwaye kwisandla sakhe sasekunene wayeneRosari eNgcwele ende eyenziwe ngokukhanya. Iinyawo zikamama ezingenanto zazibekwe emhlabeni. Makabongwe uYesu Kristu.
Bantwana bam abathandekayo, ndilapha kwakhona phakathi kwenu ngenceba enkulu kaBawo. Bantwana, ndiyabulela kuni, ukuba nikhawulezile ukubiza umnxeba. Bantwana, kudala ndisiya phakathi kwenu, kodwa yeha, anindimameli, niyazivumela nibanjiswe ngokulula kwimigibe yeli hlabathi. Bantwana bam, ubukho bam phakathi kwenu kunye nomyalezo wam baluncedo kuni, isilumkiso, intuthuzelo yoku kuninceda niqonde indlela ekufuneka niyilandile ekhokelela kuBawo. Bantwana bam, thandazani, nithathe inxaxheba kuMthendeleko oyiNgcwele, niguqe ngamadolo phambi kweSigramente Ebusisiweyo yeAltare; thandazani, bantwana, xolelanani noBawo ngomthendeleko wesono. Bantwana bam abathandekayo, thandazelani, nithandazele iCawe yam endiyithandayo, thandazani noMmeli kaKristu, thandazelani oonyana bam abathandekayo nabathandwayo [ababingeleli]. Bukela, ntombi.
Ngelixa uMama endixelela oku, ndaqala ukubona umhlaba ophantsi kweenyawo zakhe uzaliswe ngumsi omnyama omnyama; Ndabona izigcawu zemfazwe, iintlungu kunye nentshabalalo, emva koko ndabona iBasilica yaseSt Peter eseRoma nangaphakathi kuyo ziintlungu nogonyamelo. Emva koko kwigumbi elisekoneni ndabona ukukhanya okuqaqambileyo, kwaye ekukhanyeni kwakukho ababingeleli ababethandaza, bethanda kwaye benikela ngobomi babo ngenxa kaKristu kwaye benceda abanye.
Ntombi yam, thandaza nam ngeCawe yam endiyithandayo ukuze oku kukhanya kukuncinci kukhule kwaye kugubungele yonke into, ukuze ububi nobumnyama bushiye iintliziyo zoonyana bam abathandekayo ukuze uthando lweNkosi lulawule kubo. Ngamana bonke bangabathwali bokukhanya! Thandazani, bantwana, thandazani. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama ukuza kum.
Jonga umbono ka Ikhandlela elitshisayo kwiLizwi ngoku.
← ULuisa-Ndizakubetha iinkokheli
Valeria - Ukubandezeleka kunceda… →